जनसेवक डा. केसीको समर्थनमा जन सागर – जनस्वास्थ्य खबर
जनसेवक डा. केसीको समर्थनमा जन सागर
काठमाडौं,२८ साउन। चिकित्सा शिक्षा सुधारको विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै २०औं दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका जनसेवक डा. केसीको समर्थनमा जन सागर काठमाडौंमा अाज अोर्लिएको छ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अनशन लम्बिदै जाँदा उनको समर्थनमा शनिबार काठमाडौंमा विशाल जनसभा भएको हो। माइतीघरबाट सुरु भएको र्यालि नयाँ वानेश्वर पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।
सर्वसाधरण जनता, डाक्टर, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मि, विभिन्न पेशाकर्मी सहित हजारौंको सहभागितामा विशाल जनसभा भएको हो। सभामा बोल्ने अधिकाम्स वक्ताहरुले डा. केसीका माग तत्काल पूरा गर्न र उनको जिवनको रक्षा गर्नको लागि सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीले असहमति जनाएका छन् । विधेयकले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिदिने भए पछि डा. केसीले असहमति जनाएका छन् ।